Ikhadi leTarot likaMlawuli - Khetha Uphawu
Ikhadi leTarot likaMlawuli
Intsingiselo yeKhadi leTarot, uthando, ukubuyiselwa umva & Okuninzi x Ikhadi leTarot: UMlawuli
Amagama angundoqo: Amandla, Mna, Ulwazi, Igunya, Bawo
Isiqinisekiso: Ndibhiyozela amandla am angaphakathi.
Ehleli kwitrone ye-Aries, emele amandla eLanga eliphakamileyo, uMlawuli ubonisa umthombo wamandla obudoda xa izinto zakhiwe, ngocwangco olugqibeleleyo, kwaye xa uxolo lusekwe ngezenzo zobugorha kunye nesidima. Ungumgaqo wokuqonda kunye nokukhanya. Eli likhadi le-Self epheleleyo apho ukunyaniseka kuyeyona ntsika yokuxhomekeka kwaye inokuthetha ngobuwedwa, ubunzima boxanduva olupheleleyo, kunye nemigudu emikhulu kunye nobugorha obufunekayo ukuze uphumelele. Unolwazi lwezakhono zombutho kwaye uyayiqonda indlela eyomeleleyo ulwakhiwo kunye neenkcukacha ezijikeleze umntu okhokelayo kufuneka zibe njalo ukugcina inkqubo enkulu iqhubeka. Ibonisa amandla enyathelo lokudala kunye nokubaluleka koxanduva oluza nayo, kwaye kuxhomekeke kumakhadi ajikelezileyo kunokuba nzima ukubambelela kwibhalansi. Ukumela zonke iintlobo zamanani amagunya, kuya kubonisa owona mthombo wamandla angaphakathi kungakhathaliseki ukuba amagunya angaphandle kubomi bomntu. Ithetha ngomnqweno wethu wokubambelela kwintlonipho kunye nokunyaniseka nangona sihlonipha iimvavanyo zethu kubomi bethu ngaphezu kwanoma ubani, kunye nemida ephilileyo efuna ukudalwa ngokumalunga nabo bazama ukwenza izigqibo egameni lethu.
U-Emperor ubonisa ukubaluleka koBuqu kunye nokungabikho kokulalanisa kulwalamano ngalunye, oko ekugqibeleni kukhokelela ekuhlonipheni ngokupheleleyo kunye nokuncoma. Nangona kunjalo, indlela eya kweli nqanaba inokuba ngamatye kwaye oku kuya kuboniswa ngamakhadi ajikelezileyo kunye nomoya oqhelekileyo woyilo. Xa eli khadi livela ekuvulweni kothando, lithetha ngokuncoma, ukucaca kunye nemida enempilo, kunye nesidingo sokufumana indawo ephakathi eyanelisayo ngokwenene kumaqabane omabini kunye nentlonipho efunekayo ukugcina ubudlelwane buqhubeka. Iikhrayitheriya zayo akulula ukuzikholisa kodwa ziyimfuneko kwaye azinakuphepheka ekuhambeni kwexesha ukuba siza kugcina amandla ethu, impilo yethu kunye nenqanaba lethu lamandla liphezulu kwiibhondi esizidalayo. Ibonisa amandla okubambisana okuhlala ixesha elide okusekelwe kwintlonipho kunye nokuqonda okufanayo kwendawo kunye nemida yomntu.
Ikhadi elibalaseleyo lokubonisa njengophawu lwekhondo lethu lomsebenzi, uMlawuli uthetha ngezikhundla eziphezulu, isenzo esinamandla kunye nendlela esebenzayo yokusebenza eya kuzisa imithwalo yoxanduva kunye neenzuzo ezinkulu ngokuhamba kwexesha. Luphawu lobume, amandla, amandla obudoda be-archetypally kunye nokukhetha okusebenzayo, kwaye nangona ngamanye amaxesha ishiya indawo encinci yokusebenza kweqela, ithetha ngamathuba okuba umntu aphumelele. Iindlela ezikhethiweyo zizinzile, zishiya indawo eyaneleyo yokubonakaliswa kunye nokuyila izinto ezintsha, kwaye uxanduva kufuneka lucwangciswe kakuhle kwaye lunikezelwe kwabo banqwenela ukwenza inkqubela yabo, kunye nomntu wonke osebenzela isizathu esiphezulu.
I-chakra yesithathu enxulumene noMlawuli ngumthombo wethu wamandla kunye nomlilo wokutshisa zonke iingxaki ezinokubakho kwi-physiology yethu. Imele ukukwazi kwethu ukugaya ukutya kunye neemeko ebomini bethu. Eli khadi lithetha ngokuqaphela iimfuno zethu zomzimba, inkqubo ephilileyo, indlela yokuphila esebenzayo efunekayo ukuba sibambelele kumandla ethu, kunye nokubaluleka kokuphumla okucwangcisiweyo kunye nokwakhiwa okusivumela ukuba sihlaziye kumjikelezo ophilileyo. Ngokunxulumene nesisu sethu kunye neenkqubo ze-metabolic, ngumhlobo olungileyo weenkqubo zokucoca ezisekelwe kulwazi lokwenyani kunye nokwazisa ngemiba enxulumene nempilo. Isenokukhomba ubudlelwane obuyityhefu kwaye isuse amandla ethu okuzigcina kunye nokuphilisa.
Xa u-Emperor ebuyile, kufuneka sicinge ngamadabi acinezelayo e-ego kunye neengxaki ngegunya ezinokuphembelela isiseko sethu sokuzithemba. Ithetha ngomngeni wobunyani, xa sinokuvavanywa ukufikelela kwimo nokuba intliziyo yethu isitsalela kwelinye icala okanye ibiza igama lethu ukuba lehle ngendlela eyahluke ngokupheleleyo. Imvakalelo yoxanduva lobuntu obunesidima esinqwenela ukubambelela kubo iya kubonwa kwesi sikhundla, ngokungathi ikhadi lifuna ukusikhumbuza ngomntwana wangaphakathi olahliwe okanye olahliwe xa bekufanele ukuba kube sisikhanyiso esisikhokelayo. umthombo walo lonke ulonwabo kunye novuyo lwethu. Izisombululo zethu ngalo mfanekiso ujikisiweyo engqondweni zihlala zisihla ekunyanisekeni ngokupheleleyo kunye neSiqu, apho kungekho mntu wumbi ngaphandle kwethu onokuthi siyazi into esizalelwe ukuyenza kwaye loluphi ukhetho ekufuneka silwenzile ukukhulula njengoko sinjalo.
I-Emperor Time Line
Ixesha elidlulileyo - I-Emperor luphawu lwesona siseko sibalaseleyo sokukhula kwaye uthetha ngezinto esizenze kakuhle xa sakhetha ukulandela indlela esikuyo. Ngokuxhomekeke kumbuzo kunye namacala athile okufunda, ngumfanekiso oqinileyo wobudoda obeka isiseko sakhe kwimeko yethu yangoku kwaye unokubonisa ukuba ubawo uye waxhasa kwaye unolwazi olufanelekileyo, umntu esinokuthembela kuye kwixesha elidlulileyo. Ikwaligunya elilungileyo lokuvuka, sithetha ngokukhula kwethu kobuntu obusempilweni kunye nesiqu sokwenyani esithe sakhanya ukuze sikhanyise indlela yethu.
Nikela - Eli khadi liyintsikelelo kunye nomngeni omkhulu ukuba ube nalo ngoku, kuba alize lilungele nantoni na engacacanga kwaye iqonde kwaye ifuna kakhulu ukunika kakhulu. Kubonisa ukuba sikwindawo efanelekileyo, sisebenza ukusuka kwisiseko sobuntu bethu apho singenako ukuphosakela kwi-Self, kwaye sibeka i-accent ekuzihlonipheni kunye nemibandela yokuhlonipha nabanye ekufuneka icaciswe. Iyasikhuthaza ukuba siqhubele phambili, sithathe inyathelo eliyimfuneko ukuze siphakame ngokuyilayo kwindawo esilungele ukuyishiya ngasemva, kwaye isinika ulwazi malunga namandla okwenene angaphakathi kunye nomzuzu ofanelekileyo esikuwo wokwenza oko besicinga ukukwenza.
Ikamva -Xa ibekwe kwikamva lethu, uMlawuli unokubonisa ukuba asikakulungeli ukuthatha inyathelo lokuqala kwaye kufuneka silinde ixesha elifanelekileyo lokuthatha inyathelo. Ibonisa ukubaluleka kwesiseko esiza kwakhiwa kwaye ibonise indlela efanelekileyo ethathiweyo eya kusikhokelela kwizikhundla zamandla kunye namandla ukuba silandela kwaye sinakekele zonke iinkcukacha kunye namatye okuseka endleleni. Lo ngumhlobo owomeleleyo wemicimbi yobuchwephesha kunye nesimboli esibonisa indlela esiphakama ngayo kakhulu ekuzihlonipheni nasekubonakaliseni okucocekileyo kwentando yethu kunye neminqweno yethu yobuqu enzulu njengoko sidibana nomntwana wethu wangaphakathi oqaqambileyo.
I-Emperor yatshintsha kancinane kakhulu kwimbali, rhoqo ebonisa indoda ekhokelayo njengeyona ndlela iphezulu yomthetho kunye nesakhiwo somntu. Ngaxa lithile, eli khadi laba lixhoba lokuvalelwa ngokukhuliswa kwezonqulo eziphikisanayo, ngelo xesha uMbingeleli oMkhulu (uPope), uHierophant (uPope), kunye noMpress kunye noMlawuli bonke bathatyathelw’ indawo ngamaMoors amane (amaSilamsi awaye bahlala kwiindawo ezineemvelaphi zonqulo ezahlukeneyo) okanye abantu baseTurkey.
Iiary Gemini Ngena Isagittarius Emanzini